Sawirro :-Arday Soomaaliyeed oo ka qayb gashay bandhig dhaqameed ka dhacay Pakistaan. – Madal Furan
Hoy > Warka > Sawirro :-Arday Soomaaliyeed oo ka qayb gashay bandhig dhaqameed ka dhacay Pakistaan.
Sawirro :-Arday Soomaaliyeed oo ka qayb gashay bandhig dhaqameed ka dhacay Pakistaan.
Editor March 27, 2018 Warka 0
Islamabad-(Madal Furan)-Waxaa Magaalada Islamabad ee caasiamadda Dalka Pakistaan lagu qabtay xaflad lagu daahfurayay Todobaadka bandhigga hiddaha iyo dhaqanka Aradayada wax ka barata Jaamacada Islaamic International University Islamabad (IIU).
Ardayda ka qayb galaysa bandhig dhaqameedyan oo ay Soomaaliyana ka dhex muuqato ayaa waxay kala socdaan 50 Dal oo Islaam ah, iyadoo ay ka qayb galeen 20 Safiir oo lagu casuumay munaasabadda, madax iyo marti sharaf kale oo fara badan.
Waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa Safiirka Soomaaliya ee Dalka Pakistan Marwo Khadiija Maxamed Al-Makhsuumi, Lataliyaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Fedaraalka , Nuur Xirse oo bowqashu ku jooga Dalka Pakistan & Mas’uuliyiin ka tirsan Safaradda Somaliyeed ee Pakistan.
Aradayda Soomaliyeed ee wax ka barata Jaamacadda Jaamacada Islaamic International University Islamabad (IIU) ayaa halkaasi kusoo bandhigtay , ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka iyo Cuntooyinka kala duwan ee ay Soomaalida caanka ku tahay, iyagoo xiran Dharka hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Sidoo kale waxyaabaha ay ardaydu kusoo bandhigeen Xafladda Furitaanka Todobaadka hiddaha iyo dhaqanka ayaa waxaa ka mid ahaa Sawirro ka tarjumayo Taariikhdii halgamayaashii Soomaaliyeed, Magaalooyinka Caanka ah ee Dalka , Kheyraadka kala duwan ee Alle nagu mannaystay iyo Aqal Soomaali ay ku muujinayaan dhaqanka Miyiga.
Safiirka Soomaaliya u fadhida Dalka Pakistan Khadiija Maxamed Al-Makhsuumi, ayaa ugu dambayntii Aradyda kula dardaarantay in ay ilaaliyaan dhaqankeenna Suubban ee aynu ku faanno, waxayna si gaar ah ugu boorrisay in waxabarashada ay ku dedaalaan.
Ardayda ayaa dhankooda ka mahad celisay kasoo qayb galkeeda xafladda, iyagoo halkaasi ku guddoonsiiyay Shahaado sharaf ay kaga jawaabayaan wax qabadkeeda Safiirnimo iyo sida ay u garab taagan tahay Ardayda Soomaaliyeed ee halkaasi wax ka barata.
Akhriso Magacyadda 14 Maxbuus Dagaal oo Somaliland siideysay
akhri:- Kulan aan loo kala harin oo Somaliland Lix qodob ka soo saartay
Su’aalo la iska weydiinayo waxa sababay shilkii diyaarada Itoobiya.